Igumbi loKumkani elikwiSuper Deluxe elineBalcony yaBucala (2 R)
Igumbi lakho lokulala e i-resort sinombuki zindwendwe onguBasil
Indawo yokuzimela emangalisayo embindini we-Eucalyptus Plantation, i-Eucalyptus Resort yindawo enomtsalane edibana kakuhle nendalo.
Amava ngohlaza oluchumileyo, imimoya epholileyo kunye nendawo ezolileyo kwindawo yethu yokuchithela iiholide, iEucalyptus Resort yaziwa ngeenkonzo zayo zokusebenzelana nendalo kunye nokwamkela iindwendwe.
Ukhetho lokuqala lwabahambi ngenxa yendawo yalo, indawo yokuphumla ikude nesiphithiphithi sobomi. Iziko le-Munnar li-15 Km ukusuka kwipropati (20-30 mins Drive)
Amagumbi obutofotofo anebalcony yabucala enombono wemithi emide kunye nohlaza. Banikezela ngamava angenakulinganiswa okuthuthuzela kunye nokunethezeka, kunye nokwamkela iindwendwe okusebenzayo. Izinto eziluncedo ziquka ishawari yemvula, ukubaleka kwamanzi ashushu nabandayo, iLarge LED Flat TV, iCable Channels, Ceiling Fan kunye nePremium Wi-Fi.
Iindawo zabakhenkethi ezikufutshane ziquka iThe Dream Land Spice Park (4 km) kunye nePothamedu Viewpoint (14 km). Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide ikude kukuphithizela kobomi. Iziko le-Munnar li-15 Kilometer ukusuka kwipropati (20-30 mins Drive).
Ukwenza ukuhlala kwakho kube ngamava amnandi ngakumbi, i-Eucalyptus Munnar ifaka umlilo wenkampu, ukuhamba ngeziqholo, izifundo ze-Archery kunye neminye imisebenzi yokuzonwabisa. Ihotele ikwabonelela ngezothutho zesikhululo seenqwelomoya, indawo yokupaka kunye neenkonzo zamagumbi.
Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide inedesika yangaphambili kwaye undwendwe luya kukwazi ukungena/ukuphuma ngoncedo lwabasebenzi bedesika yangaphambili. Abasebenzi baya kuba nakho ukukunceda ngeengcebiso zokubona indawo okanye nayiphi na enye inkonzo.
Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide inedesika yangaphambili kwaye undwendwe luya kukwazi ukungena/ukuphuma ngoncedo lwabasebenzi bedesika yangaphambili. Abasebenzi baya kuba nakho uk…